Warshadaha Shiinaha iyo Hay'ada Soo Saara | ShiningPlast
Taringiyada HayingPlast Hay Cover Tarps waxaa lagu soo saaray tayo sare leh 200-400gsm UVI oo lagu daweeyay maro. Markaad dhammeysid nacaybka, u rog si aad u daboosho xirmooyinkaaga dhanka cimilada xun ee qabowga iyo soo-gaadhista. Daboolkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso hay dheeraad ah oo aad ka hortagto lumitaanka nafaqada.
Hay Tarps wuxuu leeyahay howl culus oo culus, poly xoojineysa oo UV u adkeysan oo aad u fiican sida Beeraha Beeraha. Maaddada birta ahi waa mid u adkaysata UV isla markaana aad ugu fiican hawlgallada beeraha ee xaraashka hayga iyo daboolida. Xaaladaha qaarkood ayaa naftiisa iska bixisa sanad gudihiis. Waxay ka samaysan tahay awood sare, dhar dhogor ka samaysan oo leh xirmooyin kuleyl ku xidhan oo dabacsanaan leh iyo iska caabin dabaysha. Maqaarka iyo weelka ayaa loo kala saarayaa 4 lakab oo maro ah, iyagoo bixiya 500 oo rodol oo xoog ah oo jiidis ah, oo samirkiisu badnaan karo.
Cabbirka 1.5Mx2M ~ 20Mx50M
Mid xoog leh oo waara: Daboolida PE Hay oo tayo sare leh waa mid adag oo waarta oo dabooli karta digaaga.
· UV-Resistant: Waxaan u adeegsanay daaweynta ugu fiican UV iyo dejinta xasilinta si aan u hubinno xasilinta inta lagu guda jiro soo-gaadhista UV ee xilliga qaboobaha ama cimilada xun.
Hore: Gawaarida Gawaarida
Xiga: Daboolka teendhada